Tartan la'aan: Nooca cusub ee nooca Beta 0.52 ee FPS bilaashka ah iyo furan | Laga soo bilaabo Linux
Maanta waxaan lahadleynaa goobta Gamer on Linux in la sii wado balaadhinta macluumaadka laga heli karo buugga aadka u fiican ee sii kordhaya ee ciyaaraha, gaar ahaan kan nooca FPS, inaan ku ciyaari karno kuweenna Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furan, ama kuwa kale.
Marka maanta waxaan ka faa'iideysaneynaa daahfurka dhowaan nooca cusub ee 'Beta' 0.52 ee «aan la xakamayn» in yar laga ogaado sifooyinka waxaa ka mid ah iyo in ka badan.
Kuwa laga yaabo inaysan noqon kuwa jecel ciyaaraha fiidiyowga, gaar ahaan kuwa Nooca FPS (toogashada-qofka koowaad) ama si fudud uga qofkii ugu horreeyay ee toogtay (Isbaanish), kuwa ciyaaraha fiidiyowga ah ayaa diirada lagu saaray isticmaalka hubka marka laga eego aragtida qofka koowaad. Ciyaarahaan fiidiyowga ah waxay inta badan la wadaagaan astaamo la mid ah kuwa kale ciyaaraha toogashada, sidaa darteed, marar badan iyagana waa la tixgeliyaa ciyaarta waxqabadka.
Kuwa, haddii ay jecel yihiin cayaaraha fiidiyowga, gaar ahaan kuwa nooca FPS, waanu kuu daynay qaar qoraallo hore oo la xiriira, si markay dhammeeyaan ay u sahamiyaan haddii loo baahdo.
1 Looga Baahan Yahay: FPS Bilaash ah oo Furan
1.1 Waa maxay Unququished?
1.3.2 Rakibaadda iyo qaabeynta
1.3.4 Sawirada shaashada
Looga Baahan Yahay: FPS Bilaash ah oo Furan
Waa maxay Unququished?
Sida lagu sheegay qaybta ku saabsan websaydhka rasmiga ah ee '' aan la xakamayn '', waxaa lagu tilmaamay sida soo socota:
"Lama ogola waa ciyaar istiraatiijiyad qof ugu horeysay oo bilaash ah oo furan oo ka hortageysa askarta aadanaha ee tikniyoolajiyad ahaan ka soo horjeedda kooxaha ajaanibta ah ee aadka ula qabsan kara. Halka ay ciyaartoydu kala dooran karaan labada kooxba, taas oo ah khibrad gebi ahaanba ka duwan labada dhinacba, maaddaama bina-aadamku diiradda saarayo dabka dhaadheer, halka shisheeyahana ay ku tiirsan yihiin dhaqsaha dhaqdhaqaaqa iyo dhaqdhaqaaqa."
Intaa waxaa dheer, waxay ku darayaan in:
"Ujeeddada ciyaar kasta waxay diiradda saareysaa burburinta saldhigga cadowga, ka hortagga xubnaha kooxda ka soo horjeedda inay soo muuqdaan. Casriyaynta labada kooxba waxaa laguhelaa isku darka waxqabadka shaqsiyeed iyo xakameynta khariidada kooxda, furitaanka marin u helida hub iyo qalab aad u awood badan oo bini aadamka ah, iyo foomam waaweyn oo cabsi galinaya shisheeyaha."
Ugu dambeyntiina, waxaa muhiim ah in la ogaado in sida laga soo xigtay horumariyeyaasheeda:
"Aan la helin waa fargeeto ah Tremulous, oo ay ku shaqeyso mashiinka Daemon. Mashiinka Daemon ee awood u siiya cayaarteena wuxuu ugu dambeyntii ku saleysan yahay Quake 3, oo ay weheliso astaamaha ET: XreaL, iyo sidoo kale dadaalkeena koodh sameynta. Waxaan hadda dib ugu qoreynaa mashiinkeena C ++ dayactirka muddada dheer."
Inta u dhaxaysa muuqaalada ugu muhiimsan waxyaabaha soo socda ayaa istaaga:
Waa il bilaash ah oo furan, iyo sidoo kale iskutallaab (Windows, Mac OS, iyo Linux).
Waxay leedahay nooc casriyeysan oo OpenGL ah 3 isla markaana bixinaya is waafajin kara.
Waxay ka kooban tahay saameyn gaar ah, oo ay ku jiraan: ubaxyada, iftiinka qarka, qulqulaha dhaqdhaqaaqa, qiiqa kuleylka, iyo kala duwanaanta midabka.
Waxay leedahay interface isticmaale libRocket casri ah oo waafaqsan heerarka HTML4 / CSS2.
Waxay bixisaa taageero macmiil VM hooyo u macquul ah ciyaarta.
Isticmaal moodooyinka IQM iyo MD5 oo leh animation qalfoof ah iyo iskudhax animation nidaam ah.
Ka faa'iideyso 2D minimaps iyo nidaam ilays waqtiga-dhabta ah.
Waxay bixisaa taageero loogu talagalay khariidadaha qaab-dhismeedka caadiga ah, khaaska ah, dhalaalka, iyo dhalaalka dhalaalaya.
Waxay isticmaashaa Bots ku saleysan Navmesh, oo adeegsada geedaha dhaqanka.
Waxay ku daraysaa taageerada deegaanka iyadoo tarjumaado kala duwan oo bulshada soo saartay oo horeyba loo heli jiray.
Xilligan wuxuu ku yimaadaa oo keliya Ingiriis.
Sida lagu sheegay a daabacaaddii ugu dambeysay ee boggiisa rasmiga ah, ah nooca beta cusub 0.52. Tanna waa lagala soo bixi karaa adiga qaybta download oo lagu rakibay laguna adeegsaday iyadoo la raacayo talaabooyinka ku qeexan adiga Goobta rasmiga ah ee GitHub.
Xaaladda soo dejinta, xirmada Zip Universal, kaliya waa inaad furtid oo barta (Console) ku fulisaa amarrada amarrada soo socda:
Amarkan koowaad wuxuu amraa hal mar oo keliya, si loo muujiyo galka pkg.
Kadib kaliya amarka soo socda markasta oo aad rabto inaad ciyaarto:
Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay oo aad ku raaxeysato kulankaan FPS ee ku jira horumarka buuxa!
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Unvanquished», oo ah qofkii ugu horreeyay ee toogtay istiraatiijiyad oo dhawaan soo saaray nambarkiisa beta-kii ugu dambeeyay ee 0.52, oo wali xor u ah inuu ciyaaro, bilaash soo dejiyo, bilaash nuqul, bilaash si uu ula wadaago, bilaash wax u barto, bilaash wax uga beddelo, bilaash wax ku biiriyo; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, guud ahaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Tartan la'aan: Nooca cusub ee nooca Beta 0.52 ee FPS bilaashka ah iyo furan
Sida had iyo jeer ah, ha dhihin luqadaha ay yihiin iyo gaar ahaan haddii ay ku qoran yihiin Isbaanish, waaba intaasoo aad iska tuurtaa ukun iyo badh.
Ku jawaab lenguacero
Salaan, Luqad Eber ah. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo ogeysiiskaaga. Hore ayaan u dhigay weedha: "Xilligan wuxuu ku yimaadaa Ingiriisiga." Qeybta muuqaalada.
Si aad u weydiiso haddii ay ku jirto Isbaanishka, uma maleynayo in nooca faallooyinka ay lagama maarmaan tahay, sidoo kale, haddii aysan si gaar ah u sheegin, waxaan caado u leeyahay in aan ku fekero in aysan ahayn iyo haddii ay markaa tahay, weyn iyo haddii kale, Ma khaldamin… Ma aragtaa sida ay u fududahay?
Salaan, Noobsaibot73. Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga. Oo marka la eego taas, isku mid ayaan u maleynayaa. Waxaan ula jeedaa, haddii aysan sheegin luqadaha, waxaan u maleynayaa inay ku timid Ingiriisiga oo keliya.
Jiilaalka CMS: Nidaam Maareyn Mawduuc cusub oo furan oo bilaash ah